Kora 37ffaa Tokkummaa Baratoota Oromoo Jarmanii (TBOJ) - Ayyaantuu News
Kora 37ffaa Tokkummaa Baratoota Oromoo Jarmanii (TBOJ) Munshin | Fulbaana 8, 2012
09/ 08/ 2012
7 comments - What do you think? Posted by admin - 11/09/2012 at 9:19 am Categories:
7 Responses to “Kora 37ffaa Tokkummaa Baratoota Oromoo Jarmanii (TBOJ)”
TBOJ says:	11/09/2012 at 10:24 am	Walgayiin kun, walgayii Tokkummaa Baqattoota Ethiopia kan biyya Jarmanii(TBEJ) jiraatan, warra qabsoo uummata Oromoo fuuldura dhaabachaa jira; amma waraqaa ragaa argachuuf jecha, Alabaa ABO jalatti walitti qabamanii jiru. Isaan TBOJ utuu hin ta’iin TBEJ dha. TBOJ seenaa qabsoo isaa dadhabiin fixatee taa’ee jira.
Tola Gamachis says:	11/09/2012 at 11:14 am	Obbo/Adde TBOJ,
Yeroo baayee waantokko dubbachaa turreera. Kunis qabsoo uummata Oromoo kan dadhabsiise keessaa inni guddaan diina irratti qabsaa’uu dhiifnee wali irratti qabsaa’uu keeny dhaa jechaa turreera, jechaas jirra. Dhaabni ykn jaarmiyaan Oromoo dhaabbanna kan jedhu kami iyyuu uummata Oromoof bu’aa kanan busuu karaaykn kallattii kanaaanii yeroo jedhu lamiin isaa gara biraan garuu gonkumaa jala dhaabachuu hinqabu. Yoo dandenye, haala ittiin walgorsinee waliin hojechuu dandeenyu haadhuummanu, yoo dahdbane garuu waldura dhaabachuun eessa illee nungeessisu hindanda’u. Waan akkanaa kun yoomi illee tokkummaa nuufidu hindanda’u caalatti wal irraa nufageesse malee. Deemee deemee bakki walga’insaa kooraa dha jedha mitiree abootiiin keenya yeroo mammaakan. Kallattii barbaadameen yoo deemameyyuu, galli isaa tokko, innis uummata Oromoo isa garbummaan rakkachaa jiru bilisa baasuu dha. Namni yaadaan walabes hanga galmi isaanii tokko ta’etti waliin hojechuun hunuma danada’ama. Kanaafuu mee wal jala dhaabachuu haadhifnu hundaa ol!
Furata Alemayehu says:	11/09/2012 at 1:26 pm	Warri TBOJ ofiin jettan kun akkan ibsa ejjennoo keessan irraa hubadhetti wal-gahii ayyaan laallattootaan guutamee akeeka ofumaa jiraachuu qabdan fakkaattu.Garuu alaabaan isin of afoo fannistaniittan kun kan dhiiga gootota Oromoo Bilisummaa Saba Oromoof kitmiyaa ta’aniin dhufe waan ta’eef amna keessan waliin wal-hin fakkaatu.Kanaaf alaabaa isin fakkaatu fannifadhaa
tokkuma says:	11/09/2012 at 3:00 pm	ya ummata oromo mee ilalaga haqa jiru isinumti hubadhame enyutu gabruma jala akka jiranu gochaa jira? enyutu oromo cunqursa jira? enyutu oromo cacabsa jira? oromoma mitire numatu walikenya gabruma jala akka hinbane gocha jiram jarmiyan keenya akka cacabu kangodhe numa mitire waliratti duludhan enyuyu kara itti fakate oromumasaf haqabsa’u oromof jedhe hanga ta’etti malif dura dhabana nuttis kara keenya kara dandeenyun malif diina oromoratti hinqabsofnu TBOJ tokuma baratota oromodha tokuman baratota kun malif akkuma jarmiya kenyaa hincacabne jechaa jiramoo? tokumakana jabessa jira? oromon walitti dhufe yero ijaaramu kan jibu kan maqa xuressu dina oromo qofa malo oromo hubadhume malif walirati dula malif diina oromoratti hindulu? debisa isinumafin dhisa…..
Q says:	11/09/2012 at 6:43 pm	Magan – Dhaaboota oromoo kanneen bilisummaa fi walabummaa Oromoof hamma dandayan hojjatan yoo gargaaruu baattan, akkamitti Qabsoo ummata oromoof gummaachuu dandeessa? yaada waliin dhawaa fi fedhii dhokotaa of keessaa qabu fakkaata. TBOJ hamma arraa akka beeynutti kan qooda guddaa kanne QBO dhaaf falmuu qofa otuu hin tahin warra qabsaawu gargaaruu dhaani. Amma Mezgabu, Habii fi Tamam faan darsa xaxatani biyyatti galuuf waan foolleefachaa jiraniif jacha. Akka oromoon qabsoo oromoo bira hin dhaabbanne yaada abdii kutannaa babal’isuu waan fedhan fakkaata. Kanneen warra abdii kutatee (defeatest) waan tahaniif ummanni Oromoo bakka jirutti saaxiluu qaba.
Tola Gamachis says:	12/09/2012 at 6:57 am	Yaa Obbo Q,
Oromoon yoom iyyuu abdii kutatuu hindanada’u! Warri duriii yoo du’an warri dargaggoon garuu itti guddanna. Ati garuu ofiikee waan abdii kutatteettu fakkata. Mee waldura hindhaabbanu maaloo!!! Biyyatti galuun osoo danda’amee hunduu nihawwa waan badaa miti.Kanaafuu yoo dandedessa haala isaan faana hojechuu dandeessu barbaadi, yoo danda’mu dide garee walirratti qabsaa’uun bu’aa tokko illee hinqabuuti walgorsuu umma wayya.
Dobbaa says:	12/09/2012 at 10:18 am	Yaa Dargagoota Oromoo jabadhaa warra haamilee keesan busuuf isiin irratti oloolaniif Gurra hin keeniinaa Dhalla Oromoo hundda Ijja tokkoon ilaalun kesan kabajja isiniif kensiissa jabbadhaa hojjedhaa Guyyaa tokko ni bilisomna